Deyn cafinta maxaa ka run ah! | allsanaag
Deyn cafinta maxaa ka run ah!
Deyn cafinta maxaa ka run ah! By: Mahad Gelle
Waxa hadda Soomaaliya, laga cafinayo maahan deyntii rasmiga ahayd oo dhowr iyo toban dal ku leeyihiin. Waxa la fududeynayo waa ‘‘arrears clearance’’ oo ah dulsaarkii iyo khidmaddii fuushay deymihii Soomaaliya, la siiyey ilaa xorriyaddii.
Haddaba maxaa socda? Waxaa socdaa waa in dolwadda Norway, bixinayso dulsaarkii Bangiga Aduunka , ku lahaa Soomaaliya, oo ah qaan–qaan ku gud oo weliba dulsaar aad u culus Soomaaliya, la saaranayo. Sidaas si lamida Midowga Yurub iyo Dowladda Ingiriisku, ayaa bixinaaya lacagtii African Development Bank, ku lahaa Soomaaliya. Waa halkaas meesha, ”bridging finance or loan”, ka imaanayso.
Wasiir Cabdiraxmaan Ducaale , asaga oo aan cidna indho sarcaadin ayuu dadkiisa runta la wadaagi karaa, sida dhabta ah ee wax u socdaana u sharixi karaa. Hayeeshee, waxuu ka door biday in uu dadka Soomaaliyeed, madaxa darbi u saaro.
← Deyn cafinta maxaa ka run ah! Qofkii labaad oo qaba cudurka Coronoviras oo laga helay magaalada Muqdisho →